ခက်ဦး – ကပ်ဆိုးထဲက အနုပညာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ခက်ဦး – ကပ်ဆိုးထဲက အနုပညာ
(မိုးမခ) သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၅
ကဗျာတွေ နိုင်သလောက်နဲ့ ဝယ်သွားကြပါ
ပြန်လည် ယိမ်းနွဲ့ ကခုန်ဖို့
လမ်းဘေးထိုင် ခွက်ရှေ့ချ ရင်ကွဲတေး သီကြူးကြပြီ
ပြန်လည် ပြုံးရယ် နိုင်ကြဖို့
တနေကုန် နင်းရသမျ ဆိုက်ကားခ
အစာအိမ်တွေ သီတွဲပစ်တင် ပြန်လည်ခရီးနှင်ဖို့
ချွေးနဲ့ရင်းရှာ နှစ်လစာ အသပြာ
ချွေးနဲ့ရင်း ပြန်ရှာတောင် လှဖို့ ခက်ချေတော့မယ့်
ကြမ်းသန့်ရှင်းရေး အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက်​
ဝင့်ဝါပလွှား ထည်​ထည်​၀ါဝါ မာန် မာနများ လွင့်စင်သွား
အသွေးအရောင် အယူအဆ ဘာသာတရားကွဲပြားမှုမှန်သမျ
ချိတ်ထား ဆက်ထား ပရဟိတ လက်များနဲ့
ယှက်ထား နွယ်ထား ပရဟိတ စိတ်ထားနဲ့
ဝတ်မှုန်ကူးလွယ် ပရဟိတ နှလုံးသားများ
ရနံ့သစ် အသွင်သစ်နဲ့ သမိုင်းဆိုးထဲ ကခုန်နေပုံက
ဘယ်လို မှော်အောင်ထားတဲ့ အနုပညာသမားမှ
တုပ စပ်ဆို ချယ်မှုန်း မဖျော်ဖြေတတ်တော့အောင်
မွှေးမွှေးမြမြ ပေါ့ပါးလှပ နေတော့ရဲ့ ။
၅ . ၃ . ၂၀၁၅